खेम भण्डारीकै कारण दिलिपसिंह विष्टको बयान फेरियो ! « News24 : Premium News Channel
खेम भण्डारीकै कारण दिलिपसिंह विष्टको बयान फेरियो !
हामीले त्यसदिन भण्डारीलाई लाइभ कार्यक्रममा बोल्न आउन भनेका थियौं । हामीले पटक–पटक उनको एनटीसी र एनसेलको मोबाइलमा सम्पर्क ग¥यौं, उनको फोन उठेन । तर पछि कार्यक्रम सुरु हुनु भन्दा डेड घण्टा अघि ल्याण्डलाइन मार्फत पाँच औं पटक गरेको फोन उनले उठाए र आफूलाई एक दिन अघि भन्नुपर्ने, आफ्नो तयारी नभएको र पछि आफ्नो केही घटना भएको आफन्तकोमा भएकाले बोल्न नमिल्ने बताए ।
शर्तमा उनले आफ्नो प्लेन टिकट, खान बस्ने व्यवस्था र सुरक्षा पनि न्जुज २४ ले दिनुपर्ने बताए । हामीले उनको टिकट काट्यौ र होटलको व्यवस्था पनि गरिदिने उनलाई बतायौं । सुरक्षा दिने काम न्युज २४ को नभएकाले हामीले प्रहरी प्रमुखलाई यसबारे जानकारी गरायौं ।
निर्मला प्रकरणमा पत्रकार भण्डारीले सबै भन्दा बढी त आफू दिलिपको सालो भनेर चलखेल गरेका छन् । हामीले कार्यक्रममा उनले एसपी डिल्लीराम बिष्टलाई म्यासेज पठाएर दिलिप आफ्ना सालो भएका बताएका थिए । हामीले यो देखाएपछि उनले त्यसको तलको म्यासेज नहेरेको भन्दै युट्ुयुब च्यानलमा अन्तरवार्ता दिए ।
म्यासेजमा यस्तो लेखिएको छ, ‘We Family People have right to participate and listen bayan of dilip when you present him at attorney office.’ अर्थात् दिलिपले सरकारी वकिलकोमा बयान दिँदा त्यो सुन्न आफूले पनि पाउनुपर्छ ।
अब म्यासेजको असर पनि हेरौं । हो भण्डारी दिलिपका आफन्त भएपछि उनी दिलिपको बयान दिदा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बस्न पाउने भए । स्मरण रहोस्, यस अघि सरकारी वकिल खेमराज भट्टसँग कुरा गर्दा दिलिपसिंह विष्टले आफूले निर्मलाको बलात्कार पछि हत्या कसरी गरेको भनि बयान दिएका थिए ।
तर पछि तिनै सरकारी वकिलले दिलिपको साविती बयान नभई ईन्कारी बयान रेकर्ड गरेका छन् । यो बयानमा विष्ट आफूले निर्मलाको बलात्कार र हत्या नगरेको बताए । हामीले दिलिपसिंह विष्टको बयान लिने वकिल खेमराज भट्टलाई सम्पर्क ग¥यौ र साविती बयान लिन छाडेर किन ईन्कारी बयान लिएको भनि सोधेका थियौं । भट्टसँग अहिले पनि यो प्रश्नको जवाफ छैन ।
भट्टको तर्क छ कि प्रहरी कार्यालयमा कुरा गर्दा दिलिपले स्विकारेपनि पछि बयान लिँदा प्रहरीले कुटपिट गरेर बोल्न बाध्य बनाएको बयान दिएको बताए । भट्टको यो कुरा पनि बाझिन्छ, किनकि वकिल भट्टलाई दिएको बयानमै दिलिपले आफूलाई प्रहरीले कुनै पनि किसिमको शारीरिक एवं मानसिक यातना नदिएको बताएका छन् ।
स्मरण रहोस्, वकिल भट्ट कञ्चनपुरका स्थानीय हुन् । जानकारहरुका अनुसार भण्डारीको त्यही म्यासेजका कारण दिलिपसिंह विष्टको बयान बदिलियो । यति मात्र होइन घटना भएको दिन दिलिसिंह विष्टलाई त्यही नजिकै देख्ने महिलाको बयान पनि हामीले कार्यक्रममा देखाइसकेका छौं ।
ती महिला अहिले कञ्चनपुर प्रहरीको सम्पर्कमा छिन् र अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याईरहेकी छिन् । तर पत्रकार भण्डारी भने प्रत्यक्षदर्शीको फण्डा पनि फिस्स भएको र कञ्चनपुर प्रहरीले रिजेक्ट गरेको भन्दै फेसबुक र आफ्नो पत्रिकामा लखेका छन् ।
अर्कोतर्फ कञ्चपुरका एसपी दिनेशकुमार आचार्यले ती महिलाको बयान महत्वपूर्ण भएको बताउछन् । पत्रकार भण्डारीका यस्तै क्रियाकलापले गर्दा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले पनि उनका हकमा अनौठो फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पारेको र अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले पत्रकार खेम भण्डारीविरुद्ध एक घण्टा जेल र एक रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो ।
धेरैलाई लाग्यो यस्तो पनि हुन्छ र ? पत्रकार भण्डारीले फेसबुक तथा पत्रिकामा अदालतको मानहानी हुने गरी लेखेको अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा छ ।
यस्तो छ फैसला !
‘यसबाट न्यायालयले यो मान्दछ, कि तँ यति तुच्छ छस्, कि सजाय पनि तेरो लागि अनुपयुक्त छ भन्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था कहिलेकाहीँ क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा पनि देखा पर्दछ । वादीले मुद्दा नगरेको भए हुने थियो तर गरिहाल्यो भनेर यस्तो प्रकृतिको क्षतिपूर्ति पनि भराउने हुन्छ । यस्तो क्षतिपूर्ति पायो भने दाबीकर्तालाई सन्देश प्रवाह हुन्छ कि अधिकार भन्दैमा सस्तो लोकप्रियताका लागि दाबी गर्ने भन्ने हुँदैन । विचार गर । त्यसैगरी सजाय पाउनेलाई तेरो लागि सजायको प्रकृति पनि शोभनीय छैनस । तँ त्यति तुच्छ होस् भन्ने हुन्छ ।’
यद्धपी पत्रकार भण्डारीलाई जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने बाटो भने बाँकी नै छ ।